10/03/2018 - Page 2 sur 4 -
Famakiam-boky : Hahazo fiofanana ireo mpanentan’ny CLIC
Manampy amin’ny fanovozam-pahalalàna sy fampivoarana ny kolontsaina. Misy 25 amin’izao fotoana ireo ivon-toerana ho an’ny famakiam-boky, fanovozam-baovao sy ny kolontsaina na Clic, izay tetikasan’ny fikambanana « Trait-d’union ». Ho fanatsarana hatrany ny tolotra omen’ireny ivon-toerana …Tohiny
Tobim-pandanjana fiara Ambohimalaza (RN2) : Hampihena ny fahapotehan’ny Lalam-pirenena
Notokanan’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, omaly, ny tobim-pandanjana fiara vaventy etsy Ambohimalaza, Lalam-pirenena Faharoa (RN2). Fotodrafitrasa goavana tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena rahateo izany. Araka izany, dia nitondra fanazavana mahakasika io fotodrafitrasa fototra io ny …Tohiny
Fambolena legioma : Aparitaka amin’ny faritra Melaky
Tetikasa mahakasika ny fambolena legioma any Melaky no nahazo voalohany tamin’ireo tetikasa maro nifaninana nandritra ny fankalazana ny andron’ny 8 Marsa 2018. Nomen’ny minisiteran’ny Mponina 20 0000 000 Ar araka izany ireo fikambanam-behivavy izay nahazo …Tohiny
CEPE sy BEPC : Ahemotra tapa-bolana ny fe-potoana fisoratana anarana
Araka ny tatitra azo avy amin’ireo Dren sy Cisco dia mbola maro amin’ireo sekoly no mbola manana mpianatra hanala fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC tsy nahatanteraka ny fisoratana anarana hiatrika ireo fanadinam-panjakana ireo ho amin’ity taom-pianarana …Tohiny
Nampiaka-peo i Lalatiana Ravololomanana manoloana ny savorovoro politika misy amin’izao fotoana izao. Nambarany mantsy fa fototry ny olana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) sy ny Lalàm-panorenana. Notsindriany mafy fa namoaka didy politika ny ...Tohiny